बीमालेख धितोमा झण्डै ४० अर्ब कर्जा, कुन कम्पनीको कति ? (तथ्याङ्क सहित) – Insurance Khabar
बीमालेख धितोमा झण्डै ४० अर्ब कर्जा, कुन कम्पनीको कति ? (तथ्याङ्क सहित)
प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १२:३६
काठमाडौं । जीवन बीमा बचत पनि हो । बचत गरेकै कारण जीवनबीमा लेख धितोमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सजिलै कर्जा लिन सकिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख धितोमा राखी ४० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक बर्ष २०७६।७७ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीहरुले उक्त रकम बराबर बीमालेख धितो कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ । हाल संचालनमा रहेका १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत बर्षको सोहि अवधिमा २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
गत बर्षको तुलनामा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमालेख धितोकर्जा १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा बृद्धि भएको छ ।
समिक्षा अवधिमा बीमा कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बीमालेख धितोकर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरको थियो । गत आर्थिक बर्षको तुलनामा कम्पनीको बीमालेख धितोकर्जामा ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
दोस्रोमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोशन रहेको छ । कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बीमलेख धितोकर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा ७८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत बर्षको तुलनामा कम्पनीको बीमालेख धितोकर्जा ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
त्यस्तै, तेस्रोमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत बर्षको तुलनामा कम्पनीको कर्जा प्रवाह १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढेको हो ।
नयाँ बीमा कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत बर्ष तुलनामा कम्पनीको बीमालेख धितोकर्जा ४२ करोड ७० हजार रुपैयाँले बढी हो ।
गुराँस लाइफले पुस मसान्तसम्ममा ४४ करोड १८ लाख रुपैयाँ बीमालेख धितोकर्जा प्रवाह गरको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख धितोकर्जा प्रवाह गरको छ ।
त्यस्तै, सन नेपाल लाइफले दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा १५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बीमालेख धितोकर्जा प्रवाह गरको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा २६ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख धितोकर्जा प्रवाह गरको छ ।
समिक्षा अवधिमा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा एकल बीमालेख बिक्रि गरेर ८ करोड ४१ करोड रुपैयाँ बीमालेख धितोकर्जा प्रवाह गरेको छ ।
त्यस्तैगरी, सबैभन्दा कम बीमालेख धितोकर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीमा प्रभु इन्स्योरेन्स र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । प्रभु इन्स्योरेन्सले पुस मसान्तसम्ममा ५३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले ४३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बीमालेख धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
खल्तीका ग्राहकले अनलाइनबाट खाद्यान्न सामाग्री किन्दा मोबाइल वालेटबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने
नेप्सेमा दुई कम्पनीको शेयर सुचिकृत, कसको कति ?
धितोपत्र बोर्डद्वारा हिमालयन डिष्टिलरीका सञ्चालक रहिसा श्रेष्ठमाथि कारवाही, १० वर्ष सञ्चालक बन्न नपाउने
काठमाडौं उपत्यकामा थप ६३७ जनामा देखियो कोरोना
महिला सहयात्रा लघुवित्तका दुई जना सञ्चालकको पदावधि समाप्त
थप ११ सय ७४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कति भए डिस्चार्ज ?